पु.समाचार | suryakhabar.com | Page 615
म्यादी प्रहरीका लागि बन्यो नयाँ नियम
on: April 09, 2017 In: समाचारTags: No Comments
काठमाडौं । निर्वाचन सुरक्षामा खटिने म्यादी प्रहरीले तयारी पोसाक नपाउने भएका छन् । प्राय सबै जिल्लामा छानिइसकेका म्यादी प्रहरीलाई आइतबारबाट सुरक्षा तालिम दिने योजना छ । तर तिनका लागि प्रहरी प...	Read more
मधेसी मोर्चालाई फकाउन यसरी आउँदैछ संशोधन विधेयक
on: April 09, 2017 In: पु.समाचारTags: No Comments
काठमाण्डौ । देशको सिमाना तत्काल हेरफेर नगर्ने हो भने संविधानको धारा २७४ को उपधारा ४, ५, ७ र ८ हटाउनुपर्ने मोर्चाले माग छ । ती धाराको सट्टा स्थायी प्रकृतिको ‘संघीय आयोग’ गठन गर्नुपर्ने उसको स...	Read more
सम्बन्ध चिसिएको बेला देउवाले दिए निधलाई यस्तो सुझाव
काठमाडौ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले उपप्रधान एवं गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिलाई हतारमा राजीनामा नदिन सुझाएका छन् । शुक्रबार केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकअघि देउवाले ‘हतार...	Read more
जसले राष्ट्रिय झन्डा सहित नेपालका रास्ट्रपति देखि प्रधामन्त्रीलाइ अन्टारटिकामा सर्बोच्च सिखरमा पुर्याए
on: April 08, 2017 In: पर्यटन/संस्कृति, समाचारTags: No Comments
काठमाण्डौ । बिस्व पर्वतारोही संजय पण्डितले केहि महिना अघि आफुले आरोहण गरेको अन्टारटिकाको सर्बोच्च सिखर बिन्सोंन मासिफमा फरफराएको नेपालका रास्ट्रपति बिद्या देबी भण्डारी , उप–रास्ट्रपति नन्द ब...	Read more
ठुला दलका नेताहरुले कहाँबाट मतदान गर्दैछन् ? (विस्तृत विवरणसहित)
on: April 08, 2017 In: पु.समाचारTags: No Comments
काठमाण्डौ । स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी २०७४ साल वैशाख ३१ गते आइतबार एकै चरणमा गर्ने सरकारले घोषणा गरेको छ । स्थानीय निर्वाचनमा राजनीतिक दलका ठूला नेताले निम्न स्थानबाट मतदान गर्दैछन् । शनिब...	Read more
भारतको हिमाञ्चलमा दुई नेपाली विद्यार्थीको मृत्यु
on: April 08, 2017 In: समाचारTags: No Comments
नयाँदिल्ली । भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा चार्टर एकाउन्टेन्ट पढ्दै गरेका दुई विद्यार्थीको मिहाञ्चल प्रदेशस्थित कुल्लु मोनालीमा हावाहुरी र हिमपातका कारण मृत्यु भएको छ ।	Read more
मंगलबार यसरी एउटा सहर एक मिनेटमै भूतको सहरमा परिणत भयो
काठमाण्डौ । खान सेइखुन भूतको सहर बनेको छ, यहाँका सडकमा मुर्दा शान्ति छाएको छ । मंगलबार रासयनिक ग्यास आक्रमणमा मारिनेका परिवार र आफन्त शोकमा डुबेका छन् । घटनास्थल पुगेका पत्रकार करिम सहिनले द...	Read more
आइजिपी नियुक्ति सम्बन्धमा सत्तारुढ दलहरुबीच महत्वपूर्ण सहमति, हुने भो कसैले नसोचेको निर्णय !
काठमाडौं । डिआइजी प्रकाशचन्द्र अर्याललाई नेपाल प्रहरीको मानिरीक्षक (आइजिपी) बनाउन सत्तासिन घटकबीच सहमति भएको छ । सत्तारुढ माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस र राप्रपाका प्रमुख नेताबीच अर्यालला...	Read more
काठमाडौ । कांग्रेस पार्टीभित्र सर्वोच्च अदालतले कार्यकारी अधिकार क्षेत्रमा प्रवेश गरेको भन्दै चिन्ता व्याप्त भए पनि शुक्रबार सम्पन्न संसदीय दल र केन्द्रीय कार्यसमितिकै बैठक भने वैशाख ३१ का ल...	Read more
तिलोत्तमा नगरपालिकामा यसरी भयो मोटरसाइकल दुर्घटनाबाट पैदलयात्रुको मृत्यु
on: April 07, 2017 In: पु.समाचारTags: No Comments
भैरहवा । रुपन्देही जिल्लाको तिलोत्तमा नगरपालिका ७ सुनेनापथमा गत चैत १७ गते साँझ ६ बजे मंगलापुरबाट जाँदै गरेको लु.७.प ७८६४ नं.को मोटरसाइकलले एक पैदल यात्रुलाई ठक्कर दिएको छ । मोटरसाइकलको दुर्...	Read more
कांग्रेस सभापति देउवा र बरिष्ठ नेता पौडेलले एकै स्वरमा भने, ‘तोकिएकै मितिमा निर्बाचन हुनेमा आशंका नगर्नुस !’
on: April 07, 2017 In: पु.समाचार, राजनीतिTags: 'तोकिएकै मितिमा निर्बाचन हुनेमा आशंका नगर्नुस !', कांग्रेस सभापति देउवा र बरिष्ठ नेता पौडेलले एकै स्वरमा भनेNo Comments
काठमाडौँ । मधेसको समस्या समाधान गर्न स्थानीय तहको निर्वाचन दुई चरणमा गर्न सकिन्छ भन्ने चर्चा चलिरहेका बेला नेपाली काँग्रेसले भने एकै चरणमा निर्वाचन हुनुपर्ने जनाएको छ । आसन्न स्थानीय तहको नि...	Read more
निजीक्षेत्र बिना मुलुक बिकास असम्भब – डा.चिरन्जीवी नेपाल
on: April 07, 2017 In: आर्थिक, पु.समाचारTags: निजीक्षेत्र बिना मुलुक बिकास असम्भब - डा.चिरन्जीवी नेपालNo Comments
काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरन्जीवी नेपालले निजी क्षेत्रबिना मुलुकको उन्नती नहुने बताएका छन् । बजेटकै कारणले बिकासनिर्माणका कामहरु नरोकिने दाबी गर्दै मुलुकको कुल बजेटको ७०...	Read more
हात्तीपाइलेको औषधि खाने असी प्रतिशत
on: April 07, 2017 In: समाचारTags: No Comments
झापा । झापा जिल्लामा यस वर्ष ८० प्रतिशत मानिसले हात्तीपाइलेविरुद्धको औषधि सेवन गरेका छन्। सात लाख ३३ हजार नागरिकलाई हात्तीपाइलेविरुद्ध औषधि खुवाइने लक्ष्य राखिए पनि करिब पाँच लाख ८४ हजार चार...	Read more
म्यादीमा जागिर खान खोज्दा यस्तो हालत !
काठमाडौं । रौतहटको एक दलित युवक म्यादी प्रहरीमा जागिर खान किर्ते गरी नागरिकता बनाएको आरोपमा प्रहरी हिरासतमा पुगेका छन् । गुजरा गाउँपालिका १ का २० बर्षीय महेश माझी मुसहर किर्ते गरी नागरिकता ब...	Read more
चुनाव दुई चरणमै हुन्छः प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले स्थानीय तहको निर्वाचन दुई चरणमै हुने बताएका छन् । पार्टी केन्द्रीय कार्यालय बैठकमा समसामयिक राजनीति र मधेसी मो...	Read more
मर्यादाक्रममा अन्याय भएको संकेत पाएपछि गृहमन्त्री निधिद्वारा राजीनामा !
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले कमल थापालाई उपप्रधानमन्त्रीमध्ये वरिष्ठतम भएको संकेत दिएपछि आक्रोशित विमलेन्द्र निधि मन्त्रिपरिषद्बाट बाहिरिने तयारीमा छन् ।	Read more
नेपाल र भारत दुवैले जवाफ दिन सकेनन्, तोकियो अर्कोे बैठकको मिति
काठमाडौँ । नेपाल–भारत सम्बन्धको सबै पक्ष अध्ययन गरेर प्रतिवेदन दिने म्यान्डेट पाएको प्रबुद्ध व्यक्ति समूहको तेस्रो बैठकमा नेपालले १९५० को सन्धिका चार धाराले नेपाललाई अप्ठ्यारो परेको धारणा रा...	Read more
अस्पतालमै जयकलाले किन गरिन् आत्महत्या ?
काठमाडौं । राजधानीको नेसनल ट्रमा सेन्टरमा उपचाररत एक विरामीले बिशीबार बिहानै आत्महत्या गरिन् । निकै ठूलो चोटपटक लागेका, दुर्घटनामा परेका र उपचारमा लामो समय लाग्नसक्ने विरामीको उपचार गर्नका ल...	Read more
सिरहामा नगरपालिकालाई गाउँपालिकामा परिणत गरिएपछि…!
on: April 06, 2017 In: समाचारTags: No Comments
सिरहा । सुखीपुर नगरपालिकालाई गाउँपालिकामा परिणत गरिएको भन्दै सुखीपुर नगरपालिका बचाउ संघर्ष समितिले बुधबारबाट आमरण अनशन सुरु गरेको छ । सुखीपुर नगारपालिका कायम गराउन माग राखी समिति संयोजक बीपी...	Read more
कांग्रेसले दियो लचिलो हुने संकेत
on: April 06, 2017 In: पु.समाचारTags: No Comments
काठमाण्डौ । प्रमुख सत्ता साझेदार कांग्रेसले मधेसी मोर्चा चुनावमा आउने सुनिश्चित भए एकै चरणमा चुनाव हुनुपर्ने आफ्नो पूर्ववत अडानमा केही लचिलो हुने भएको छ । आइतबारको कान्तिपुरमा लेखिएको छ, प्र...	Read more